10 यात्रा गर्दा सुझावहरू मुद्रा बचत गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 यात्रा गर्दा सुझावहरू मुद्रा बचत गर्न
रेल यात्रा, रेल यात्रा सुझावहरू, यात्रा युरोप
कसले गर्दा सम्भव पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ छैन? यात्रा महंगा हुन सक्छ, तर बचत एक ट्रेन र आफ्नो रेल टिकट खरीद द्वारा हाम्रो मद्दत संग योजना, तपाईं लागत तल ल्याउन सक्छ. यी संग यात्रा गर्दा पैसा बचत 10 सुझावहरूको तपाईंको अर्को छुट्टी र आफ्नो वालेटमा धन्यवाद हुनेछ.
सुझाव 1: एक फ्रिज र एक माइक्रोवेव अथवा भान्सा क्षेत्र संग बुक कक्ष
केही मानिसहरूलाई गर्दा खाना पकाउनु रुचि हुनत छैन छुट्टी, 'घर' मा एक दिन एउटा भोज खाने तपाईं एक बाल्टिन बचत. किन कफी एक अनदेखी एक कप भइरहेको आनन्द छैन नयाँ गन्तव्य पागल कक्ष सेवा शुल्क बिना? बरु खान-मा नास्ता र दिउँसोको खाना र त्यसपछि एक फैंसी खाने मा splurge. एक माइक्रोवेव र फ्रिज पनि बचा reheating लागि उपयोगी हुनेछ!
सुझाव 2: तपाईं बुक अघि, हुन स्थान सजग तपाईं कहाँ बस्नु हुनुहुन्छ
यातायात चाँडै थप्न सक्नुहुन्छ, त तपाईं एक केन्द्रीय स्थानमा रहन सक्नुहुन्छ. बुकिंग टाढा ठाउँ सस्ता लाग्न सक्छ तर तपाईं शाब्दिक पछि यसको लागि तिर्छु. आदर्श, बुक कतै तपाईं सबैतिर हिंड्न सक्छौं. मात्र के तपाईं हुनुहुन्छ शहर बढी हेर्न प्राप्त हुनेछ, तर तपाईं पनि गर्नेछौं यात्रा गर्दा पैसा बचत.
सुझाव 3: यात्रा गर्दा सुरक्षित मुद्रा गर्न शहर पर्यटन कार्ड लागि हेर्न
कार्ड आधारमा, तपाईं शीर्ष आगन्तुक आकर्षण गर्न निःशुल्क प्रवेश पाउन सक्छौं, मा छूट रेस्टुरेन्ट र पसलहरूमा, छोड्न-द-लाइन व्यस्त मा विकल्पहरू आकर्षण, निःशुल्क सार्वजनिक यातायात, र पनि निःशुल्क guidebooks. आधारमा आफ्नो यात्रा, यो पैसा लायक हुन सक्छ.
सुझाव 4: सर्वश्रेष्ठ कक्ष प्राप्त छैन
कति समय तपाईं साँच्चै आफ्नो कोठा भित्र खर्च गर्न जाँदैछन्? तपाईं बस त्यहाँ सुतिरहेको गरिनेछ? तपाईं एक साथ एक कोठा चाहिन्छ राम्रो दृश्य या त धेरै अतिरिक्त स्थान? तपाईं सुविधाहरु प्रयोग गर्नेछ, यस्तो पूल वा फिटनेस कोठा रूपमा? का इमानदार हुन गरौं, छुट्टी गरेको फिट रही बारेमा छैन! त्यसैले आफ्नो कोठा स्मार्ट यात्रा गर्दा बुक र पैसा बचत.
सुझाव 5: कम ठाउँमा थप समय खर्च अनि यात्रा गर्दा तपाईं मुद्रा बचत हुनेछ
हामी ढिलो यात्रा प्रेम. वास्तवमा, अधिक सही ... हामी अर्थपूर्ण यात्रा प्रेम. बरु एक एक अन्त देखि रेसिंग को अर्को देश, वा माध्यम tearing6देशहरूमा6सप्ताह, तपाईंलाई छन् क्षेत्र चिन्न, राम्रो. एक रेल लिएर यो सबै भन्दा राम्रो तरिका हो, तपाईं जान रूपमा सबै साइटहरु मा लिन समय र दृश्य छ रूपमा. सजिलो लिएर आनन्द बाहेक, काम धेरै उडानहरू, बस यात्राको, र ड्राइभिङ लामो दूरी साँच्चै आफ्नो बजेट मा खान सक्नुहुन्छ. त्यसैले सुस्त, थप लिन, and discover all the cool free stuff.
सुझाव 6: सामाजिक मिडियामा पालना
द्वारा यात्रा गर्दा पैसा बचत "रुचि" आफ्नो मनपर्ने यात्रा साइटहरु मा Facebook र ट्विटर मा तिनीहरूलाई "पछि". यो सिधै आफ्नो सामाजिक मिडिया च्यानलहरू मार्फत लागि यात्रा कम्पनीहरु तातो सम्झौताहरू जारी गर्न थप साधारण प्राप्त गर्नुपर्छ.
सुझाव 7: समाचार पत्र सहमतिहरू
कुनै पनि समय अवधि लागि नेट मा उपलब्ध वर्तमान सम्झौताहरू सूची उत्पादन कि केही समाचारपत्र सदस्यता प्राप्त. यहाँ यात्रा गर्दा समाचारपत्र पैसा बचत गर्न हाम्रो वर्तमान विकल्प हो:
यात्रा चिडियाघर - आफ्नो शीर्ष को साप्ताहिक मुफ्त समाचार सदस्यता 20 सम्झौताहरू - विभिन्न देशहरूमा लागि संस्करणहरू.
सम्झौता आधार - त्यहाँ निःशुल्क सम्झौता अलर्ट लागि साइन अप. तिनीहरूले unadvertised बिक्री संग सम्झौता र अरु कतै फेला पार्न हुनेछ प्रदान गर्दछ.
बेसल जेनेभा गाडिहरु गर्न
लियोन एयरपोर्ट सेन्ट मोरित्ज ट्रेनहरू
सुझाव 8: भाडामा अपार्टमेन्ट
अपार्टमेन्ट लागि बम हो परिवार वा अतिरिक्त जीवित ठाउँ र एक भान्सा लागि देख ती त तपाईं बचत गर्न सक्नुहुन्छ खाना. airbnb छagood way to get low-cost vacation rentals and sublets from locals in 180 देशहरूमा.
पेरिस रियम्स गाडिहरु गर्न
पेरिस Nancy गाडिहरु
Metz पेरिस गाडिहरु
Nancy पेरिस गाडिहरु
सुझाव 9: यात्रा कम सिजन मा
तपाईं सक्षम हुनुको लक्जरी छ भने शिखर सिजन यात्रा जोगिन, समाउ! मूल्यहरु स्कूल बिदा समयमा एकदम कूद. र यो केवल छैन गर्मी तपाईं हुँदैन - भन्ने भूल छैन इस्टर, क्रिसमस र दुई आधा अवधि बिदा थप हुन सम्भावना महँगो. सिजन बाहिर यात्रा मतलब हुनेछ सस्ता रेल टिकट र कम व्यस्त गन्तव्यहरू - यात्रा गर्दा पैसा बचत गर्न जीत-जीत अवस्था!
प्रोभान्स रेलहरूको लागि ल्योन एयरपोर्ट
पछिल्लो एक: यात्रा गर्दा फ्री मुद्रा बचत गर्न वाइफाइ खोज्नु
निःशुल्क वाइफाइ फेला मा पुस्तकालयहरु र क्याफे, ताकि तपाईं आफ्नो डाटा हथौडा छैन. र भने तपाईं छौं phoning यो अझै पनि त्यहाँ RAINING छ भने पत्ता लगाउन घर, यस्तो स्काइप वा Google रूपमा निःशुल्क सेवा प्रयोग गर्न नबिर्स!
कोलोन बन गाडिहरु गर्न
बन कोबलेन्ज गाडिहरु गर्न
कोबलेन्ज Bingen गाडिहरु गर्न
Bingen फ्रैंकफर्ट गाडिहरु गर्न
यात्रा गर्दा हामी पैसा बचत गर्न सहयोग गरे?
हामी तपाईंलाई मदत भने हामीलाई थाहा दिनुहोस् यी संग यात्रा गर्दा पैसा बचत 10 सुझाव. हामी जान्न चाहन्छौं! त्यहि समयमा, भ्रमण बचत तालिम प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो सम्झौता मा रेल टिकट. कुनै लुकेको शुल्क, कुनै जायका! बस ट्रेन यात्रा!
तपाईंले यी तयार छन् 10 यात्रा गर्दा सुझावहरू पैसा बचत गर्न? पुस्तक तपाईंको रेल टिकट अहिले र गरौं आफैलाई यात्रा को सौन्दर्य द्वारा दूर बह गर्न!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 यात्रा गर्दा सुझावहरू मुद्रा बचत गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-save-money-traveling/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
budgettravel europetravel moneysavingtips savemoney रेल सुझावहरू traveltips
रेल यात्रा सुझावहरू, रेल यात्रा बेलायत, यात्रा युरोप
रेल यात्रा सुझावहरू, यात्रा युरोप
रेल यात्रा, रेल यात्रा बेल्जियम, रेल यात्रा इटाली, रेल यात्रा स्पेन, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 जुलाई 2020अगस्ट 2020सेप्टेम्बर 2020अक्टोबर 2020नोभेम्बर 2020Dec 2020जनवरी 2021फरवरी 2021Mar 2021अप्रिल २०२१मे २०२१जुन २०२१